Khiyaanooyinka si aad uga faa'iideysato WhatsApp-ka ku jira iPhone-kaaga (2/2) | Wararka IPhone
Khiyaanooyinka si aad uga faa'iideysato WhatsApp-ka ku jira iPhone-kaaga (2/2)
Waxaan halkaan u joognaa daabacaadda labaad ee ururinta "tabaha" taas oo aan ugu talo galnay inaan uga faa'iideysanno farriinta ugu badan ee farriinta adduunka. WhatsApp shaki la’aan waa macmiilka ugu isticmaalka badan ee qof kasta, halkan iyo meel kasta, labadaba Android iyo IOS, runti waxaan ku bixinaa qayb badan oo kamid ah waqtiga aan ku isticmaaleyno taleefanka casriga ah ee arjigan, markaa waa wakhti fiican in la barto inta ugu badan ka faa'iideyso, iyada oo ujeedadu tahay hagaajinta iyo hagaajinta mid kasta oo ka mid ah dhaqdhaqaaqyada aan ku dhex sameyno. Ha moogaanin mid ka mid ah tilmaamaheena si aad uga faa'iideysato WhatsApp-ka ku jira iPhone-kaaga.
Ugu horreyntii, xusuusnow inaadan seegin qaybtii hore ee taxanahan haddii aadan awoodin inaad akhrisato, «Khiyaanooyinka si aad uga faa'iideysato WhatsApp-ka ku jira iPhone-kaaga (1/2)»Waa kan ugu horreeya labada qoraal. Hadda waxaan uga tagi doonnaa talooyinka ugu dambeeya si WhatsApp ay u noqoto aalad oo aysan u noqon mid qarow ah, taasna waxay tahay in WhatsApp ay tahay seef laba af leh, waxay keli kali ku noqon kartaa waqtigeenna firaaqada ee kumanaan iyo kumanaan kooxo aan macno lahayn ama banool ah. Waa inaan ogaanno sida loo xakameeyo WhatsApp oo aanan u oggolaan in WhatsApp ay na maamusho.
1 La soco arimahaaga gaarka ah, hagaaji cidda marin u heleysa macluumaadkaaga
2 Calaamadda laba-geesoodka leh ee buluugga ah ayaa sidoo kale la qaabeyn karaa
3 Kaydso, waxba kuuma soo kordhayaan markaad tirtirto wada sheekaysiga
4 WhatsApp waa caajis? Nadiifi kooxaha WhatsApp
La soco arimahaaga gaarka ah, hagaaji cidda marin u heleysa macluumaadkaaga
Haddii WhatsApp wax uun ku guuleysatay waayadan dambe, waxay ku jirtaa asturnaan, kaliya maahan sirta oo umuuqatay inaysan waligeed imaan doonin oo dhammaatay toddobaadkan, laakiin sidoo kale maxaa yeelay, in muddo ah hadda, waxay noo oggolaatay inaan xulano cabbiro kala duwan taas oo fududeyn karta isticmaalkeeda, iyo sidoo kale in wax yar oo dhib ah looga dhigo kuwa caado u leh inay kufsadaan nolosha gaarka ah ee dadka kale. Sidaa darteed, gudaha 'WhatsApp-ka' goobaha dhowaan la beddelay ', qaybta' Account 'waxaan ku ogaan doonnaa in qaybta ugu horreysa ay tahay qaybta Asturnaanta.
Halkaas waxaan ku leenahay fursado kala duwan:
Ugu Dambeeyay Waqtiga: Yaa arki kara isku xirkeena ugu dambeeya
Sawir muuqaal ah: Ayaa arki kara sawirkeena muuqaalkeena
Xaaladda: Yaa arki kara xaaladdeenna
Waqti kasta oo aan riixno mid ka mid ah xulashooyinkaan, waxaan kala dooran karnaa seddex fursadood si aan ugu oggolaano ama u diidno helitaanka macluumaadkeenna, «oo dhan«,«Mis Xiriirrada»Ama«Naadi»Waxay noo oggolaan doontaa inaan la qabsanno cidda heli doonta xogtan.
Calaamadda laba-geesoodka leh ee buluugga ah ayaa sidoo kale la qaabeyn karaa
Argagixisadu waxay dul saarneyd dadka isticmaala WhatsApp, mar dambe ma ahan xiriirkii ugu dambeeyay ee go'aaminaya inaad aqrisay fariin iyo inkale, calaamadda buluugga ah ee buluugga ah ayaa muuqatay, calaamadda saxda ah ee ku saabsan haddii aan aqrinnay fariin iyo in kale. Si kastaba ha noqotee, waa mid si buuxda loo qaabeyn karo (in kasta oo tan ay ogyihiin inta badan isticmaalayaashu), waad barkinta kartaa xaqiijinta akhriska ee ugu dambeeya ee badhanka qaybta asturnaanta ee WhatsApp.
Kaydso, waxba kuuma soo kordhayaan markaad tirtirto wada sheekaysiga
Waxaa laga yaabaa inaad wax badan ka qoomameyn karto adoo wada hadalada si joogto ah u baabi'iya, maxaa yeelay wada hadalada xaalado badan kuma koobna oo keliya qoraalo, hada waxaan sidoo kale helnaa dukumiintiyo iyo warbaahin badan oo aanan waligeen ogaan karin goorta aan u baahanahay. Sidaas, Waxaan kugula talineynaa inaad keydiso sheekaysiga halkii aad ka tirtiri lahayd. Intaas waxaa sii dheer, markay timaado ka leexashada bidix ilaa midig, haddii aan si tartiib ah u dheereyno, waxay kaliya faylalka, ka dhigeysaa xulashada ugu raaxada badan.
Intaas waxaa sii dheer, adoo diiwaan gelinaya wada hadalada si joogto ah, waxaan si fudud uga heli karnaa kuwa na xiiseynaya qeybta wada sheekaysiga, sidaas darteed wada hadalada ama kooxaha dhaqdhaqaaqoodu yar yahay waa la keydin doonaa waxayna ku laaban doonaan qeybta hore marka ay u baahan yihiin dareenkaaga. Inaad ku yeelato wada hadal yar qeybta hore waxay kaa caawineysaa inaad si deg deg ah wax ugu aqriso ugana shaqeyso WhatsApp, sidoo kale mudnaanta koowaad siiso dareenka aad siiso.
WhatsApp waa caajis? Nadiifi kooxaha WhatsApp
Had iyo jeer xad dhaafka ah ee macluumaadka, wada sheekaysiga iyo warbaahinta kala duwanaanta ayaa sababa in WhatsApp ay dhibaato ka haysato fulinta iOS, gaar ahaan aaladaha leh 1GB RAM ama ka yar, taasi waa sababta aan kugula talineyno inaad xilliyada qaar faaruqiso kooxo WhatsApp ah oo waxyaabo badan ka kooban laakiin aan ku habbooneyn, sidan ayaa culeyska arjiga si weyn hoos ugu dhici doonaa, sidoo kale Nadiifinta marwalba oo ah wada hadalada Dhimashada (waqtiga loogu talagalay) waxay kordhin doontaa waxqabadka arjiga. Si aad u faaruqiso wada sheekaysiga waxaan kaliya u baahanahay inaan ku rogno sheekada su'aasha yar bidix ilaa bidix, «… Lagu daray»Markaan riixno pop-up ayaa u muuqda dhowr ikhtiyaar, waxaan gujinaa«madhan» chat oo waxay noqon doontaa gebi ahaanba nadiif.
Waxaan rajeyneynaa in taladeena ay kuu adeegtay, haddii aad fikrado cusub leedahay, ha ka waaban inaad uga tagto faallooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Khiyaanooyinka si aad uga faa'iideysato WhatsApp-ka ku jira iPhone-kaaga (2/2)
faaruqinta sheekada waxay tirtirtaa kaliya sawirada fiidiyowyada maqalka iyo wixii la mid ah, ama wax walba oo ay ku jiraan wada hadalka?
Wax kasta oo ay ku jiraan wada hadalka.
Wuxuu tixgeliyey in waxa ugu muhiimsan xagga asturnaanta ay tahay in meesha laga saaro khadka tooska ah.
Aad u xiiso badan macruufka 10 iyo fikradaha watchOS 3
WiFiMan waxaa lagu heli karaa bilaash wakhti xaddidan